सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको पहिलो त्रैमासको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त ? हेरौँ कम्पनी विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home लगानी सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको पहिलो त्रैमासको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त ? हेरौँ कम्पनी विश्लेषण
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको पहिलो त्रैमासको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त ? हेरौँ कम्पनी विश्लेषण
इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशत बोनस र ४० प्रतिशत हकप्रद वितरणको तयारी
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाको आधारमा १० प्रतिशत बोनस शेयर र ४० प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्रीको प्रस्ताव भदौ २७ गतेकोे नवौं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गराईसकेको सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रू. ५ करोड २२ लाख ८७ हजार नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्ने अवस्थामा यो त्रैमासमा कम्पनीले ३१ प्रतिशतले गत वर्षको तुलनामा चुक्तापूँजी वृद्धि गरी रू. ६५ करोड ६२ लाख ५० हजार पुर्याएको छ । जगेडाकोषमा भने ८७ प्रतिशतले बढेर रू. ३७ करोड ८१ लाख ८८ हजार पुगेको छ । यो त्रैमासमा रू. ३५ करोड २४ लाख ४८ हजार बीमा शुल्क आर्जन गरेको यस कम्पनीले रू. ४ करोड १३ लाख ७ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीमा हाल ३ लाख २१ हजार ९ सय ५२ बीमालेख जारी रहेको छ । साधारण सभाबाट पारित लाभांश भने कम्पनीले वितरण गर्न बाँकी रहेको छ ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू.९७९
१८० दिनको भारित औसत मूल्य :रू.१११७.५४
वेबसाइट : suryalife.com
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा :
कम्पनीले सार्वजनिक गरेकोे चालू आवको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार बीमा कोषमा रू. २ अर्ब ७१ करोड ७ लाख २१ हजार जम्मा भएको छ । यो कोषमा गत वर्षको तुलनामा ८९ प्रतिशतले रकम घटेको देखिन्छ ।
पहिलो त्रैमासमादीर्घकालिन लगानीमा राम्रो प्रगति देखिएको छ । कम्पनीले ३ गुणाले बढाएर रू. २ अर्ब ४० करोड ३० लाख ५२ हजार दीर्घकालिन लगानी गर्न सफल भएको छ ।
चालू सम्पत्ति रू. १ अर्ब ४९ करोड ५४ लाख ४३ हजार रहेको यस कम्पनीको चालू दात्यित्व भने रू. ४० करोड ८७ लाख ८३ हजार रहेको छ ।
यो त्रैमासमा ३ गुणा बढी रू. ७ करोड ६ लाख ७९ हजार आम्दानी गरेको यस कम्पनीले रू. १ करोड ८३ लाख ९२ हजार खर्चिएको छ ।
कम्पनीले नोक्सानीका लागि १ सय ३५ प्रतिशतले बढाएर रू. ८२ लाख ४३ हजार रकम छुट्याएको छ ।
पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३१ दशमलव ३८, मूल्य आम्दानी अनुपात ३२ दशमलव शून्य ६, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. ६ सय ३९ दशमलव ११ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ६३ दशमलव ७५ रहेको छ । आइतवारको मूल्य नेटवर्थको ६ गुणा छ ।
खरीद चाप : कम्पनीको आइतवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्रि चापको तुलनामा खरीद चाप २ गुणा बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म १ हजार ४५ कित्ता शेयर खरीद र ७ सय ४४ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग रहेको थियो ।
आइतवार भएको शेयर कारोबार विवरण :-
१३ अगष्ट २०१७ १२ नोभेम्बर २०१७
मैनबत्ती विश्लेषण : कम्पनीको ५३ दिनको कारोबारको अन्तिम दिनमा सेतो क्लोजिङ मारोबोजु आकृती बनेको छ । यसले आगामी दिनमा शेयर मूल्य बुलिशमा जाने सङ्केत देखाउँछ ।
आरएसआई : कम्पनीको ५३ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्यूट्रल जोन (४४ दशमलव ७९ स्केल) मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन : कम्पनीको ५३ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन १२ दशमलव शून्य ८ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ५३ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्य रेखाभन्दा हालको मूल्य तल छ । हालको मूल्य रू.९ सय ७९ बाट बजार अवस्था परिवर्तन भइ मूल्य महँगिएमा रू.९ सय ८० मा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने मूल्य सस्तिएमा रू. ९ सय ५६ मा टेवा पाउन सक्छ ।
११ बैशाख २०७५, मंगलवार १६:११
११ बैशाख २०७५, मंगलवार १६:०३
११ बैशाख २०७५, मंगलवार १५:५६